असिनापानीले किसानलाई लुटेर फरार ! - The Public Today
असिनापानीले किसानलाई लुटेर फरार !
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १२:०२
करेसाबारीमा लटरम्म तरकारी फल्न लागेको थियो । लौका, फर्सी, खुर्सानी फलेको देखेर किसान कम्ता खुशी थिएन । चारैतिर सुख्खा रहेको मौसममा करेसाबारीको थांग्रोमा हरिया सागसब्जी झुलिरहेको देखेर मेहेन्ती किसान दंग थिए । त्यहाँबाट तरकारी किनेर खाने उपभोक्तहरु बाटो कुरेर बसेका थिए । कति किसानले करेसाबारीबाट तरकारी टिपेर बिक्री गर्ने तर्खरमा थिए । तर, बैशाख १२ गतेको असिना पानीले गर्नु ग¥यो—सबै सागसब्जीलाई असिनाले चोट दिएर क्वाप्पै निल्यो । असिनापानीको अघि किसानहरुको केही लागेन ।
सारा संसार कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला नागरिकलाई लकडाउनको समयमा हरियो तरकारीको अभाव नहोस् भनेर किसान दिनरात खेतमा खेतबारीमा पाँखु बजारेर तरकारी उब्जाएका थिए ।किसानको मेहनतले कोरोना भाइरसलाई टक्कर दिइरहेको भान हुन्थ्यो । घरबाट टाढा रहेको खेतमा सिँचाइको व्यवस्था थिएन । चैत—बैशाखको सुख्खायाममा जर्किनमा पानी ढुवानी गरेर कृषकले खेतमा सिचाई गरेका थिए ।
करेसाबारीमा श्रमको लगानी सँगै आर्थिक लगानी उनीहरुले खन्याएका थिए । कडा मेहनतको फल कहिले आउँछ ? भन्ने आशामा थिए, किसानहरु । जब फल आउने बेला भयो, हावाहुरीसंगै आएको असिनाले किसानको मेहनतमा पानी मात्रै पटाएनन्, सपना नै लुटेर छिनभरमै गायब भयो । मनग्य आम्दानी हुने र नागरिकलाई तरकारी उपलब्ध गराउने किसानको सबका सब सपना अधुरै रह्यो, श्रम मात्रै डुबेन, लगानी पनि बर्षाको भेलमा बग्यो ।
त्यो पापी असिना गरीब किसानका लागि कोरोना भन्दा कम खतरनाक थिएन । पछि वडा कार्यालयबाट अनुगमन भायो । घरका टाली सबले हे¥यो । उनीहरुलाई राहत दियो ।तर किसानको बाली तिर कसैको ध्यान गएन। एउटा किसानले आफ्नो खेतको बालीलाई आफ्नो छोराछोरी सरह मानेका हुन्छन्,जसरी एउटा आमाबुवाले आफ्नो सन्तानलाई ममता दिन्छ । छोराछोरीलाई असल बनाउन वुवाआमाले दिनरात कम्ता मेहनत गरेको हुदैंनन् । हो, त्यस्तै किसानहरुले बाली उब्जाउन रातदिन माटोमा पसिना बगाएर खेती लगाएका हुन्छन् ।
भरखरै असिनापानीले दिएको दुःखले किसान मरेतुल्य भएका छन् । हातमुख जोड्ने बाटो बन्द भएको छ । श्रम पनि खेर गयो, लगानी पनि डुबेको अवस्था छ । किसानको पीडा यो सरकारले बुझ्छ कहिले ? असिना पीडित किसानलाई तत्काल स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारले राहत दिनु पर्छ ।
ख्याल गर्नुस्, यदि किसानले अन्न, तस्कारी, तेलहन,दलहन बाली उब्जाएन भने सिंहदरबारमा घुम्ने हाम्रा प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मुखमा पनि अन्न पर्दैन । किसानले माटोमा पसिना बगाएन भने कसैको पेटमा अन्न पर्दैन । त्यसैले किसानलाई हेल्ला होइने माया स्वरुप राहतको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
(लेखिका साह समाजिक अभियानी हुन् )